Castle Valdštejn - PetrPikora.com
Valdstein (Waldstein) bụ mbibi na Semily district dị nso na Turnov, na mpaghara Paradaịs nke Bohemia. Obodo nke Onyenwe anyị nke Valdštejn sitere na ọkara nke abụọ nke 13. narị afọ. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ndị kasị ochie na mpaghara a.
Wallenstein nọrọ 100 ruo ọtụtụ afọ. Dị ka ihe atụ. M maara Zdeněk nke Wallenstein, a courtier nke King John of Luxemburg, Hynek nke Wallenstein, onye na 1336 abuana ke agha njem ndị mmadụ merela n'ime Lithuania Czech King na John von Wallenstein, onye gbazinyere 1500 groschens Margrave Charles, mgbe e mesịrị King Charles IV.
Na njedebe nke 14. obibi Vartenberg nwetara site na narị afọ, nke bụkwa nke ezinụlọ Markvartic. Na Henry nke Wartenberg kpebiri dozie ha ụgwọ Hussite ndú Jan Zizka nke Trocnov, onye 1424 spring wee na agha ka Turnovo, merikwara ya, gbaghaa ya n'ebe obibi ndị mọnk ma merie Wallenstein. Mgbe ahụ ọ gwara nke Mr. Valečov, enyi ya, bụ ndị na 1427 tụrụ mkpọrọ n'ihi na Prince Sigismund Korybutovič, nwa akwukwo nke oche-eze. Na 1431 ọzọ supporter nke òtù okpukpe Hus Castle Ramesh alụkwaghịm Stakory (mgbe ahụ nke Hradek).
Na afọ 1438-1439 nnukwu ụlọ (na nso niile Kavčiny) jide òtù ndị omempụ nke na-apụnara mmadụ na ya mere ma na 1440 meriri n'ógbè ego. Reshaping nwe nọgidere na-aga. Sofa nke Helfenburg na 1514 Smiřičati si Smiřice bi ebe a. Gburugburu afọ nke 1550 nnukwu ụlọ ahụ dina n'ọkụ ash.
Na njedebe nke 17. Na mbibi, hermit Václav Holan Rovenský biri na mkpọmkpọ ebe na di iche iche pilgrim malitere ịbịa ebe a. Ndị nwe obodo ala na ụlọ Wallenstein (nwe nke afọ 1620-1821) na mgbe ha Aehrenthalové (1821-1945) wuru si mkpọmkpọ ebe nke a ihunanya njem. Na 1713 e nwere steepụ nkume, e wuru 1722 n'ogige mbụ nke Ụlọ Nzukọ nke St. Jana Nepomuckého na n'oge na-adịghị anya mgbe e mesịrị ọtụtụ ihe oyiyi, afọ nke 1817 bụ ụka nke St. John Baptist. Na 1836, a na-ewu ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ n'azụ awara nkume, nke nwere ọtụtụ ihe oyiyi.
Ezinụlọ Čihulkov nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na nnukwu ụlọ si na 1923 ruo 1949. Ekem enye esịn ke otu mbon Sokol. Kemgbe Agha Ụwa nke Abụọ, ebe ugwu ugwu.
Enwere ike ịnweta mbibi na ụkwụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha uhie uhie ma na-acha uhie uhie, ogige ụgbọala kacha nso dị nso na 1 kilomita. Site na Turnov, na mpaghara cadastral nke Mašov dị nso na Turnov, nnukwu ụlọ ahụ dị na 3 km jjv dị anya. nduzi. A ga-enwe ike ịgagharị na ọnwa oge, na ụgwọ ụgwọ. Nbibi ya bụ mita 389, elu ya bụ mita 90. Ụdị idobere Hruboskalsko dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke nnukwu ụlọ ahụ.
Hrad se německy nazýval Waldenstein, v českém překladu tedy Oké ọhịa.
Obraz světce v kapličce je možná jedinou existující podobiznou Karla Hynka Machy. Onye edemede nke 1836 eserese bụ Frantisek Mašek (Maschek, 1790-1862).
Na Valdštejně složil skladatel Josef Bohuslav Foerster oratorium SV. Václav a Egwuregwu nke Ise.
Czech ParadisehradCastle ValdštejnWallensteinmkpọmkpọ ebe